MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa qabsoomi waayay kulankii 3aad ee Kalfadhiga 5aad ee Gollaha Shacabka, kaasoo fashil kusoo idlaadey kadib markii buuq iyo sawaxan hareeyay Hoolka shirka.
Fashilka ayaa yimid kadib markii Xildhibanada isku khilaafeen in kulanka laga dhigo mid albaabada u xiran oo saaxafadda banaanka looga saaro iyo in laga si furan oo warbaahinta goobjoog ka tahay su'aallo loo waydiiyo wasiiradda difaaca iyo amniga.
Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, gudoomiyaha Gollaha Shacabka ayaa ku dhawaaqay inuu xiran yahay kulankii maanta, oo u qabsoomi waayay fowdo iyo buuq ay sameeyeen Xildhibaanada mucaaradka.
Fadhigii maanta ayaa ahaa mid aad loo sugayay, oo todobadkii tagey looga wacay Wasiirada amniga iyo Gaashaandhigga oo Xildhibaano ay mooshin ku dalbadeen in looga yeero Gollaha, si amniga faraha ka baxay su'aallo looga waydiiyo.
Baaqashada kulanka ayaa yimid kadib markii xalay Gollah Wasiiradda, oo badankood Xildhibaanno yihiin ay shir degdeg ah ku yeesheen xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.
Farmaajo ayaa qoraal ku weeraray kooxda qabyo isagoo ku eedeeyay maleegida mooshino.
Soomaaliya iyo Cuba oo dib usoo celinaya xiriirkooda diblumaasiyadeed
Soomaliya 21.06.2019. 01:28
Farmaajo oo la kulmay gudoonka labada Aqal ee BF Soomaaliya
Soomaliya 30.04.2019. 16:40
Dilal iyo dagaal culus oo ka dhacay Muqdisho [Faahfaahin]
Soomaliya 13.04.2019. 10:52